मिना ढकालको गीतमा सोनीका रोकाया यस्ती देखिइन् (भिडियो) - USNEPALNEWS.COM
मिना ढकालको गीतमा सोनीका रोकाया यस्ती देखिइन् (भिडियो)
युट्युबमा लाईक भन्दा डिसलाईक बढि पाउने सेलिब्रेटिमा पर्छिन मिना ढकाल । केहि समय अगाडि हास्यकलाकार मनोज गजुरेल संग सम्बन्ध बिच्छेद गरेपछि उनि मिडियामा एकाएक चर्चा संगै बिबादमा आईन। यति मात्र हैन उनको खिल्ली उडाउनेहरुको ताती नै लाग्यो ! हालै उनले ‘म हु नेपालि छोरी’ बोलको नया गीत तयार गरेकी छिन् ।
यसअघि उनले केहि गीतहरु पनि सार्बजनिक गरिन तर हास्य पात्र मात्र बनिन ! हाल यसको म्युजिक भिडियो छायांकन समेत भैसकेको छ । जसमा पहिलो पटक सोनीका रोकाय गुन्यु चोलीमा प्रस्तुत भएकी छिन्यी। २ आफ्नो आफ्नै शैलीबाट चर्चित छिन्, अब यो गीतको भिडियो सार्बजनिक भएपछी कतिको डिसलाईक र सकारात्मक प्रतिक्रिया पाउने हो ? त्यो भने हेर्न बाकि नै छ।
कोरोना बाट मृत्यु हुनेको संख्या चार सय नाघ्यो
RSS	 September 26, 2016
संविधानसभामा सहमति समितिको प्रतिवेदनमाथि छलफल जारी